Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 8 ka mid ah 10ka Ameerikaanka ah waxay taageeraan Baasaboorada Tallaalka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
81.8% dadka Mareykanka ayaa Jecel Baasaboorada Tallaalka
Fikradda baasaboorka tallaalka ayaa si aad ah ugu soo kordhayay dadka.
Sahanka waxaa ku jiray 997 qof oo ku nool Mareykanka oo la weydiiyay su'aalo kala duwan oo la xiriira baasaboorada tallaalka.
Boomers -ka Carruurta ayaa ugu yar inay taageeraan baasaboorada tallaalka.
50.9% wadarta jawaabeyaasha ayaa sheegay inay u badan tahay inay ku safraan gudaha iyagoo wata shuruudaha baasaboorka tallaalka.
Natiijooyinka sahaminta tallaalka ee dhowaan waxay muujineysaa sida Mareykanku u arko xannibaadaha safarka ee kala duwan ee la xiriira masiibada COVID-19.
Iyada oo ay socoto dood ku xeeran xorriyadaha shaqsiyeed iyo kartida lagu safri karo iyada oo aan laga horjoogsanayn dalka oo dhan, badankoodu waxay hadda rumaysan yihiin in caddaynta tallaalka ay tahay shardi.
81.8% dadka Maraykanka ah ee la daraaseeyay waxay taageersan yihiin fikradda Baasaboorka Tallaalka, iyadoo Boomers Baby ay yihiin kuwa ugu yar ee taageeri kara fikraddan.
Waxa kale oo sahanku tilmaamay jiilka ay u badan tahay in ay diidan yihiin baasaboorka talaalkas iyo sida ragga iyo dumarka jawaab -bixiyeyaasha labaduba u arkaan arrinta.
Fikradda baasaboorka tallaalka ayaa si aad ah ugu soo kordheysay caan. Iyadoo New York City iyo qaybo ka mid ah California Hadda oo waajibinaya caddaynta tallaalka, oo ay la socdaan shirkado waaweyn sida khadadka dalxiiska ee Noorweey, waa lama huraan in magaalooyinka kale, dawladaha, iyo shirkaduhuba ay bilaabi doonaan inay sidaas oo kale sameeyaan. In kasta oo gobollada qaarkood sida Florida iyo Texas ay mamnuuceen baasaboorada tallaalka, haddana dadweynaha guud ayaa bilaabay inay la qabsadaan fikradda.
Waxaa la qabtay intii u dhexeysay 2dii -3dii Juun, sahanka waxaa ka mid ahaa 997 qof oo ku nool Mareykanka oo la weydiiyay su’aalo kala duwan oo la xiriira baasaboorka talaalka -oo lagu qeexay “dukumenti caddaynaya inaad ka tallaashay COVID-19.” Waxaa sidoo kale la weydiiyay dookhooda la xiriira xannibaadaha safarka masiibada guud, muwaadiniinta la daraaseeyay waxay matalaan tirokoobyo kala duwan oo ay ka mid yihiin jinsi (lab/dheddig), jiil (Boomers Baby/Generation X/Millennials/Generation Z), iyo kuwii horay loo tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin.
Jawaab bixiyaasha badankoodu waxay yaqaanaan ereyga baasaboorka tallaalka, iyada oo ku dhawaad ​​82% ay sheegeen inay hadda fikradda ku taageerayaan qaab uun ama mid kale. Natiijooyinkan waxay ku xirnaayeen da 'iyo jinsi labadaba, iyadoo haweenku 7% ay u badan tahay inay taageeraan baasaboorada tallaalka marka loo eego ragga. Dadka aan la tallaalin waxaa ka mid ah, ragga ayaa aad ugu dhiirran in la tallaalo iyada oo ku saleysan xannibaadaha safarka marka loo eego dumarka.